ATN: တူ ၃ တူ
သူပုန်နဲ့ သူပုန်မ ညားကျတော့လည်း သူပုန်ဖြစ်နေတဲ့ ကာလမှာတော့ အကြိုက်တူမတူဆိုတဲ့ နေရာမှာ တူတယ် မတူဘူးဆိုတာ ပြောဖို့ ရွေးစရာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဥပမာ စားစရာဆိုရင် တပ်က ထုတ်ပေးတဲ့ ပဲ၊ အာလူး၊ ငပိနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စိုက်ကာ ရှိတာလေးနဲ့ပဲ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ အဆင်ပြေသလို စားခဲ့တြယ်။ တပ်က အလုပ်တွေကို ပေးတဲ့အတိုင်း သူ့တာဝန်သူလုပ် ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်လုပ်နဲ့ ဘာပြဿနာမှကို ရှိစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ တပ်မဟုတ်တော့တဲ့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်လည်း ရောက်တော့ သူပုန်ဘ၀မဟုတ်တော့တဲ့အချိန်မှာ စားစရာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နေထိုင်မှု ဘ၀ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ် အားလပ်ချိန် အပန်းဖြေစရာ နေရာပဲဖြစ်ဖြစ် အကြိုက်တွေက ရွေးစရာများသွားပြီ မတူတော့ဘူး။ ဥပမာ အမဲသားတို့၊ ဆိတ်သားတို့ကို လုံးဝအနံ့ခံလို့မရပဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုပဲ ကြိုက်တဲ့ သူပုန်မဟောင်းနဲ့ အဲဒီအသားတွေကိုမှ တခြားအသားတွေထက် ပိုကြိုက်တဲ့ သူပုန်ဟောင်းက အကြိုက်မတူတော့ဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့ စားစရာမှမဟုတ်ဘူး တခြားကိစ္စတွေမှာလည်း ရွေးစရာ မရှိတဲ့အချိန်မှာ အကြိုက်တူမတူဆိုတာကို မသိပေမယ့် ရွေးစရာတွေ များလာတဲ့အခါမှာတော့ အကြိုက်တွေက မတူတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ သူပုန်အချင်းချင်း ယူတာလည်း အကြိုက်တူတယ်လို့ သိပ်မထင်ပါနဲ့။ ဘာမှမတူပေမယ့် နားလည်မှု ပေးနိုင်ဖို့က အဓိကပဲလို့ ကျွန်မထင်တယ်။ ကိုအောင်သာငယ် ပြောတဲ့ ”အချစ်ဆိုတာကလည်း တကယ်တော့ ဘ၀ဆိုတဲ့ ငရုတ်ဆုံထဲ ထည့်ထောင်းလိုက်တဲ့အခါ မှုန့်မှုန့်ညက်ညက်ကြေသွားတတ်တဲ့ ပဲခြမ်းစေ့တွေလိုပါပဲ ... အခြေခံအားဖြင့် ဘ၀တူမှသာ ဖြစ်မယ်လို့ အကိုကတော့ ထင်တယ်...” ဆိုတာကို လုံးဝ လက်ခံတယ် ဘ၀တူဖို့ အချစ်ရေရှည် တည်တံ့ဖို့အတွက် နားလည်မှုကို တည်ဆောက်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။
ဖတ်မှတ်သွားပါကြောင်း ။ :D
ဘာသာတူပြီး တယောက်နဲ့ တယောက် နားလည်မှု ၊ယုံကြည်မှု ရှိရင် ရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ် ။
(ကိုယ်လိုရာ တွေးပြီးပြောသွားသည် )...
နို့ မို့ ဆို အပြိုကြီး ၊ လူပြို ကြီး တွေ လျှံထွက်နေမစိုး၍...
လု စားဖို့မလိုတော့ ဖူးလေ .... ဟိဟိ
ဒီသူပုန်ဆိုတာ မပါလို့ရမလား။ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းဆုံးမစာမှာ
ဒီစာလုံးကြီးက ဖတ်ရတာ တစ်မျိုးကြီးပဲ။
အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့သူတွေအတွက် မရည်ရွယ်ဘူး ဆိုပေမယ့်လည်း ဖတ်သွားပါတယ်....
ပထမ ကောင်လေး လိုချင်တဲ့ အချက်၃ ချက်ထဲကဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့ ၂ ချက်ကတော့
အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် လောဘနဲတဲ့ မိန်းခလေးရဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဖူး ထင်တယ်...
ကိုအောင်သာငယ်ပြောသွားတဲ့ ၃ ချက်ထဲကဆိုရင်တော့ ဘာသာတူတာ တခု
ဘဲ လွယ်ကူလောက်ပေမယ့် ကျန်တဲ့ ဘ၀တူ
ဖို့နဲ့ ၀ါသနာတူဖို့တော့ ရွေးချယ်တဲ့အခါ ခက်ခဲနေမှာပါ...ယူပြီးမှ အဲဒါတွေ ညှိယူမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် လုံးဝမှားပါလိမ့်မယ်... အိမ်ထောင်မကျခင်တော့ ချစ်သူဘ၀ ခဏတာ နားလည်သည်းခံ
ပေးနိုင်ကြပေမယ်လို့ ယူပြီးကြရင်တော့ ရေရှည်မှာ
တယောက်နဲ့တယောက် ဘာမဟုတ်တာနဲ့ တောင် သည်းမခံနိုင်ကြ နားမလည်နိုင်ကြ တော့ဘဲ ချစ်ခင်စုံမက်မှုတွေ နည်းလာနိုင်ကြမှာတော့ အသေအချာပါဘဲလေ....ကိုအောင်သာငယ်ပြောသွား
My recommend to U - single is...
If U got nothing better to do in life, marry available girl around u and waste your life @ S**, Babies & other things not useful for Society and try enjoy yourrself..
It's called Married life...
ဒါပေမဲ့ ဘဝတူတယ် ဆိုတာ မေသူနားမလည်လို့ ။ ဆင်းရဲတဲ့သူ ကဆင်းရဲတဲ့သူနဲ့ ယူ။ ချမ်းသာရင် ချမ်းသာသူနဲ့ ယူ အဲလိုမျိုးကိုဆိုလိုတာလားအစ်ကို။
ဝါသနာကတော့ အကုန်လုံးတူစရာ တော့ မလိုဘူးထင်တယ်နော် အစ်ကို။ အဟိ ရန်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ။ အလိုက် အထိုက်ပေါ့။
အဟဲ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပီးသွားချိန် မျက်စိထဲတန်းပေါ်လာတာက သတို့သားက အာရပ်ခေါင်းပေါင်းနဲ့ အေကေ၄၇ကိုင် ..သတို့သမီးက ဗုံးတွေခါးမှာပတ်ထား .. မင်္ဂလာပန်းခြင်းအစား မိုလိုတော့ပ်ပုလင်းနဲ့ ...ဟီးဟီး
အိမ်ထောင်မှုဒဿနကို မှတ်သားသွားတယ် အစ်ကို :D
အစ်ကိုပြောသလို တူနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့လေ..
အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုကတည်းက အေးအတူ ပူအမျှ မျှဝေခံစားဖို့ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ဘ၀ တစ်ခုတည်ထောင်ရတာကိုး.. တူ ၃ တူ မတူတောင်မှ နှလုံးသားအကြီးကြီးတွေ ပိုင်ဆိုင်နေရင်တော့ အဆင်ပြေကောင်း ပြေနိုင်တယ် ထင်တာပါပဲ.. (ဟဲဟဲ..ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ် ၀င်ပြောသွားတာ..:)
နောက်တယောက်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ခိုးဖတ်သွားသဗျ
တူ၃တူဆိုလို့ဝါးတူ၊ ကော်တူ၊ စတီးတူတွေလားလို့း)
တူလွန်းရင်လည်းမကောင်းဘူးထင်တယ်နော်။ အထူး သဖြင့်ဝါသနာတူတာပေါ့။ စာအုပ်လုဖတ်နေရမှာစိုးလို့ ပါ။
း) ။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ
ဒီနေ့လက်ချာများတယ်။ မခင်ဦးမေဆီမှာလည်း ဒီလိုပြောတယ်။
ဆိုးတာက ကိုက်တံရှိပြီး ပိတ်အုတ်မရှိသလိုဖြစ်နေသဗျာ...
၃တူမှာ ဘာမှ မတူဘူး ကို ATN ရေ
အကိုပြောတာလက်ခံပါတယ်။ ဘ၀မတူခဲ့ရင် ပြဿနာတွေ အများကြီးရှိနိုင်တယ်။
ဘ၀ဆိုတာ ချမ်းသာတာ ဆင်းရဲတာပြောတာ မဟုတ်ပေမယ့် ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ ဘ၀ပုံစံပြောတာပါ။
နောက်ပြီး တန်ဖိုးထားတာချင်းတဲ့ တူသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်...
မရောက်ဖြစ်တာကြာနေပြီ... အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ နော်း)